Kobo ane maReaders akawanda asi haisiriyo kambani inotengesa ebook akawanda | MaReaders ese
Joaquin Garcia | | eBooks, makambani
Iyo ebook musika inotungamirwa nemakambani makuru uye makuru ezvishambadziro zvigadzirwa, asi dzimwe nguva izvo hazvina kukwana kuti uve unonyanya kutengesa mutengesi. Iyo Webhu Munyori Mubhadharo munguva pfupi yapfuura akaburitsa Inofungidzirwa Kutengesa Chirevo iyo inotora Kobo Rakuten sekambani yechina mumusika weEbook.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti Barnes & Noble vane matambudziko akakura emukati uye kuti Apple haina eReader iri kutengeswa, iwo makambani achakabata nzvimbo yechitatu neyechipiri zvichiteerana.
El report haimiri kukwezva kutarisa nekuti B & N inotengesa chete muUnited States ine yakawanda yekutengesa ebook kupfuura Kobo munyika shanu, chimwe chinhu chichiri kuda kutaura zvishoma.
B & N, kunyangwe paine matambudziko ayo, ndiyo yechitatu kambani inotengesa ebook akawanda
Amazon inoramba iri kambani yekutanga mumusika we ebook ine zvinopfuura mamirioni mazana mashanu emazana zviyero zvakatengeswa uye zvichifunga nezvekutengesa kubva kunyika ina. Apple neayo iBooks ichine ine mwero 62 mamirioni mayuniti akatengeswa, nhamba iri kure neyechitatu uye yechina mutengesi uye zvakatonyanya kubva kune yekutanga. Kobo neB & N vari padyo, asi zvakadaro, B & N inotengesa mamirioni mapfumbamwe ebook kupfuura Kobo.
Chokwadi vazhinji venyu havazopa kutendeseka kwakawanda kune aya manhamba, asi ichokwadi kuti kuve neReader kana chitoro chemabhuku chepamhepo hakuvimbisi kuti ndiyo kambani yakanakisa mumusika webook. Zvinhu zvakaita kuverenga kunyorera, mhando yemabooks kana kungoita ecosystem yekambani inoita mamwe ma ebook anotengeswa. Izvi zvinozadziswa neApple kana B&N asi zvinoita sekunge Kobo haasati apedza zvese, kunyangwe hazvo maReaders avo ari kuita zvirinani uye zvirinani.
Chero zvazviri, kuti iwe unotengesa mamwe ma ebook hazvireve kuti kambani yakaipa, kure nayo, kana kuti inomira kugadzira maReaders. Zvisinei Zvirongwa zvemakambani aya zvichachinja mushure mekuziva iyi data? Iwe unofungei nezvazvo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » makambani » Kobo ane maReaders akawanda asi haisiriyo kambani inotengesa ebook akawanda
Kobo Aura H2O Edition 2, nyowani isina mvura eReader